211 Aluminum titanium carbide, Ti2AlC - Goodao Technology Co. , Ltd.
MAX phase ပစ္စည်းသည်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကြွေထည်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထင်မြင်ယူဆနိုင်သည်။ အခြေခံဓာတုဗေဒပုံသေနည်းမှာ M (n + I) Axn ။ A: နေမကောင်း A နှင့် VA အဓိကအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောအချက်များ။ X - ကာတွန်းနိုက်ထရိုဂျင်။
MAX phase ပစ္စည်းသည်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကြွေထည်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထင်မြင်ယူဆနိုင်သည်။ အခြေခံဓာတုဗေဒပုံသေနည်းမှာ M (n + I) Axn ။ ဖြေ။ မကျန်းမမာ A နှင့် VA အဓိကအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောအချက်များ။ X - ကာတွန်းနိုက်ထရိုဂျင်။ ထူးခြားသော nano-layered crystal ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည် MAX အဆင့်ပစ္စည်း၏မြင့်မားသောစီးကူးမှု၊ အပူစွမ်းအင်ခံနိုင်ရည်၊ ဓာတ်တိုးနိုင်မှု၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်မှုဒဏ်ခံမှုစသည်တို့ကဲ့သို့သောသတ္တုနှင့်ကြွေထည်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုပေါင်းစပ်စေသည်။ ဇီ ၀ensensor၊ ion screening, catalysislithium ion batteries, supercacacitors, high အပူကြွေထည်များနှင့်အခြားနယ်ပယ်များစွာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
မော်လီကျူးပုံသေနည်း Ti2 AIC
CAS ကုဒ် 12537-81-4e
ဖော်ပြချက် မီးခိုးရောင် - အနက်ရောင်အမှုန့်
အရည်ပျော်မှတ် 2000 t
မော်လီကျူးအလေးချိန် 195 .7
အသုံးပြုသည် မက်စ်အထူးကြွေထည်ပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ အပူချိန်မြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပစ္စည်းများရွေးချယ်ထားသည့်ပုတ်ပစ္စည်းများ၊ ဓာတုတိုက်ဖျက်ရေးပစ္စည်းများနှင့်အပူချိန်မြင့်သောအပူပေးပစ္စည်းများ။
တိုက်တေနီယမ်အလူမီနီယမ်ကာဘိုက် (TI-Al carbide) သည်အလွှာသုံးထပ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည့်ကြွေထည်မြေထည်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ပစ္စည်းသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ရူပဗေဒပညာရှင်များကကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စိုးရိမ်ပူပန်စေသည်။
တိုက်တေနီယမ်အလူမီနီယမ်ကာဗိုက် (Ti2AlC) သည်ရှီagonagonal crystal system တွင်ပါဝင်ပြီးသတ္တုနှင့်ကြွေထည်မြေထည်ဆိုင်ရာလက္ခဏာများရှိသည်။ ကောင်းသောစီးကူးမှုနှင့်အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း၊ မြင့်မားသော elastic ကိန်းပကတိတန်ဖိုးနှင့်နိမ့်သော Vickers တို့၏မာကျောမှုနှင့်ကောင်းမွန်သောပျက်စီးမှုခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။
၎င်းကိုအခန်းအပူချိန်တွင်စက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးမြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ပလပ်စတစ်ပုံသဏ္formationာန်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဓာတ်တိုးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအပူထိတွေ့မှုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ပျက်စီးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောဓာတုဓာတ်ပြုမှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
MAX အဆင့်ကြွေထည်မြေထည်များ (Ti3SiC2, Ti2AlC အပါအဝင်) စသည်တို့သည်လုပ်ဆောင်နိုင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းအသစ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းကြွေထည်များတွင် ternary carbides (၆၀) ကျော်ပါဝင်သည်။ M သည်အကူးအပြောင်းအုပ်စု၏ရှေ့သတ္တုဒြပ်စင်ကိုဆိုလိုသည်။ A သည်အဓိကအုပ်စု၏အဓိကကျသည်၊ တတိယအုပ်စုနှင့်စတုတ္ထအုပ်စုဖြစ်သည်။ X သည်ကာဗွန်သို့မဟုတ်နိုက်ထရိုဂျင်အတွက်ဖြစ်သည်။ Ti3SiC2 သည်အများဆုံးအကျဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်သည်။ Ti3SiC2 ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Drexel တက္ကသိုလ်မှပါမောက္ခ Barsoum M ကပူပြင်းစွာနှိပ်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်စွာဖန်တီးပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတ္တိများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၄ င်း၏ထူးခြားသောနာနိုမီတာအလွှာရှိသောကျောက်သလင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကြောင့် ၄ င်းကြွေထည်ပစ္စည်းများသည်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ခံနိုင်စွမ်း၊ မိမိကိုယ်ကိုချောဆီအရည်ကြည်ခြင်း၊ မြင့်မားသောကျိုးပဲ့ခြင်း၊ ဤအမျိုးအစားမျိုးကိုမြင့်မားသောအပူချိန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပစ္စည်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြီးပစ္စည်း၊ ဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်အပူချိန်မြင့်အပူဒြပ်စင်အဖြစ်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းထုတ်ကုန်များကိုအပူချိန်မြင့်မားစွာဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားခြင်း၊ MXene ရှေ့ပြေးများ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကြွေထည်များ၊ လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၊
ပစ္စည်း parameter သည်
စက်မှုပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု ဖိအားအစွမ်း （MPa） 764
ကွေးနိုင် strength MPa 375 ± 15
ချိုးဖျက်နိုင်ခြင်း （MPa ?? m1 / 2） ၇.၂
Vickers မာကြောခြင်း （GPa） ၃.၅
လူငယ်မော်ဂျူး （GPa） 297
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု တစ်ခုတည်းစီးကူး （× 106S ?? m ﹣ 1） ၂.၉ （၂၅ ℃）
ခုခံ၏အပူချိန်ကိန်း （× 10﹣3K ﹣ 1） ၃.၁
အပူဂုဏ်သတ္တိများ အပူချဲ့ထွင်နိုင်မှုကိန်းအကျယ်ကျယ်ပြန့်ခြင်း （× 10﹣6K ﹣ 1） ၉.၀
အပူစွမ်းရည် （J ?? mol ﹣ 1 ?? K သည် ﹣ 1 -
အပူစီးကူး （W ?? m ﹣ 1 ?? K သည် ﹣ 1） -
ရှေ့သို့ တိုက်တေနီယမ် Hydride အမှုန့်, ​​TiH2
နောက်တစ်ခု: တိုက်တေနီယမ် Stannum carbide, Ti2SnC